Umkhiqizi Wefektri Engcono Kakhulu Womshini Wokuhlanza kanye Nemboni | Toonney
Isisekelo ekuhlangenwe nakho kweminyaka nobungcweti ekukhiqizeni izinto ze-tungsten carbide, iToonney sintering furnace plant ithuthukisa imishini yamanje emakethe, esiza uToonney ukuthola imikhiqizo esezingeni eliphakeme. Lindela ukuthengisa imikhiqizo ye-tungsten carbide, uToonney ubuye athengise isithando somlilo kwamanye amakhasimende awadingayo.
Lesi sithando somlilo se-HIP siyisithando somlilo esivundlile esivundlile, esinamasekethe amathathu ehlukene wokulawula ukuqinisekisa ukufana kokushisa okuphezulu. Lolu hlobo lwesithando sintering lungaqeda izinqubo ezisebenzayo zokukhipha i-wax, isintering, ukulungiswa komshini, ukuqina kwengcindezi, ukupholisa ngokushesha esikhathini esisodwa sokusebenza. Futhi ingafakwa ekusetshenzisweni kwensimbi eqinile yensimbi nobumba bensimbi. Ngaphezu kwalokho, lesi sithando sintering singanciphisa okokusebenza kwe-wax, irabha, i-Ethocel ngaphansi kwengcindezi engemihle ye-Argon / Nitrogen (0-0.1Mpa) ne-de-PEG (inhlangano ye-Burner ifakiwe) ngaphansi kwengcindezi ye-hydrogen (0-6Mpa).
Yonke inqubo yokusebenza ilawulwa yi-SIEMENS PLC + IPC + 15inches display engakwazi ukubona imisebenzi yokulawula okuzenzakalelayo, ukuqapha, ukulandelela nokuqopha, ukuzihlola ngokwakho, ukuxazulula inkinga yamazinga okushisa, izinga lokushisa elikhulayo, ukufaka isikhathi nokugeleza kwegesi, ingcindezi ngokusebenzisa yonke inqubo.
Izingxenye eziyinhloko zesithando sintering (Izinto zokulawula, izinzwa, izingxenye ze-graphite, izithandani ezishisayo, ama-valve njll) zingeniswa zisuka e-USA, Japan naseJalimane. Lawa mazwe abhekele ileveli yezobuchwepheshe enenzuzo enkulu emhlabeni esintini somlilo. Bangakwazi ukuhlangabezana nemfuneko yokukhiqizwa yesikhathi eside ezinzile futhi enokwethenjelwa.
UToonney unezintathu zochungechunge lwesithando sintering esingahlukaniswa yingcindezi. Ziyi-1Mpa sintering HIP furnace, 6Mpa sintering HIP furnace kanye ne-10Mpa sintering HIP furnace. Ukusetshenziswa okuvame kakhulu kwesithando somlilo sintering insimbi eqinile. I-Toonney inamamodeli amathathu athandwa kakhulu aqanjwe ngokwenani lesikhala esisebenzayo, angama-Model TESTSIP200 * 200 * 600, Model SIP300 * 300 * 900-6Mpa, Model SIP500 * 500 * 1800-6Mpa
Thatha iModeli encane kunazo zonke i-TESTSIP200 * 200 * 600 ngokwesibonelo, imininingwane ejwayelekile yobuchwepheshe ifakiwe kuhlu ngezansi kwamatafula. Vele, lo mshini onzima (isithando sintering) uhlala waklanywa futhi ukhiqizwa ngokuya ngemininingwane yemininingwane yokusetshenziswa okukhethekile kwekhasimende. Ikhasimende lingadinga ngokukhethekile ukushintsha noma iyiphi idatha esineqembu lobuchwepheshe lobuchwepheshe ukushintsha ukwakheka kwalesi sithando somlilo ukuze kufinyelele imfuneko ekhethekile.
Isikhala esisebenzayo sokulayisha impahla Ukuphakama 200 / Ububanzi200 / Ubude 600
Isikhathi sokuphila esenzelwe ukusebenza Izikhathi ezingama-6000
Ukuboshwa kwe-Round Graphite muffle (i-Inner dia, i-outer dia. Ubude) Φ330 φ380 800L
Ivolumu esebenzayo 24L
Isisindo esikhulu sokulayishwa kwempahla (Kuya ngesakhiwo) 50kg
Amandla we-transformer 150KVA
Ukushisa inombolo yesifunda / isiguquli 3
Imfuneko yesikhala (Ubude * Ububanzi * Ukuphakama) 3.5 * 4 * 3.5 * M
Umbala Okumhlophe nokuluhlaza okwesibhakabhaka / Okuphuzi nokumnyama
Isilawuli sikagesi iKhabhinethi ukubonisa IsiNgisi
Ingqikithi yesisindo 12T
2.Main idatha eyisisekelo yobuchwepheshe
I-vacuum enhle kakhulu yeqembu lepompo evamile yokuphuma esimweni esibandayo esomile 0.5Pa
(Okuphansi kakhulu kungaba yi-0.1Pa)
Isilinganiso sokuvuza okuphezulu kakhulu esithandweni esomile esibandayo esomile I-10Pa / H
Ukushisa okuphezulu 1600 ℃
Ukusebenza ukunqanyulwa 1580 ℃
Ukubekezelela izinga lokushisa ku-vacuum nezinto ezilayishiwe nokushisa okungaphansi kuka-1000oC ± 5 ℃
Ukubekezelelana kwezinga lokushisa lapho kumanzisa ngaphansi kwengcindezi engu-6Mpa Algon nokushisa ngaphezu kuka-1000oC. ± 7 ℃
Ingcindezi Maximun (Ukuphepha valve kulungiselelwa) 6.0Mpa
Isilinganiso seqoqo le-Binder ≥97.5%
Isikhathi sokupholisa ngokulayisha okugcwele Hours4 amahora
Ukucindezela kwe-Argon (Ukuhlanzeka ≥99.99%) Min.8Mpa Ubukhulu. 15Mpa
Amandla azinzile ku-50bar naku-1400 ℃ 105KW
Amandla amakhulu AC400V 50Hz
Amandla wesikhungo sokulawula I-AC220V / DC24V
Voltage ukubekezelelana ± 5%
Amandla kagesi wokulawula i-disconnector yekhabhinethi Ubukhulu. 300A
UToonney uzothumela ochwepheshe ukusiza ukuhlangana nokuqedela isivivinyo sokuthuma ukuqinisekisa ukusebenza okujwayelekile komsebenzi ngamunye. Futhi kunesikhathi sonyaka owodwa sewaranti lapho kwenzeka noma iyiphi inkinga esithandweni sintering, uToonney uzoyilungisa ngaphandle kwenkokhiso. Ngemuva kwewaranti yonyaka owodwa, ukugcinwa kwenkokhiso kuzohlala isikhathi sonke sokuphila kwesithando somlilo.
Isithando somlilo sakwaToonney sinesitifiketi sikahulumeni waseChina kanye nesitifiketi se-AMSE somzimba wesithando somfutho wokuqinisekisa ukuthi ikhwalithi nokusetshenziswa okuphephile kwalesi sithando somlilo emakethe yasekhaya nakwamanye amazwe. Futhi uma kunezitifiketi ezithile ezikhethekile zalolu hlobo lwesithando somlilo sintering ezweni lakho, i-WToonney nayo ingazama ukufaka nokuthola ngemali eyengeziwe, ukuze uzizwe ukhululekile ukuthenga isithando somlilo wethu, kuhle futhi kuphephile!
Igama lomkhiqizo: Isithando somlilo
Indawo Yomsuka: I-Fujian, China (Mainland)
I gama le-brand: Toonney
Inombolo imodeli: Isithando somlilo se-10MP sinter-HIP
Uhlobo: Ukuthambisa isithando somlilo se-HIP
Izinto: Isilawuli sethempelesha, idivayisi yokuxhumana, into yokushisa njalonjalo
Isicelo: Insimbi kanye nomkhakha wensimbi, imboni yokusansimbi, umkhakha omusha wezinto ezibonakalayo
Usayizi: 8 * 9 * 4M
Inkokhelo imigomo: FOB Xiamen
1. Isithando somlilo esingasetshenziselwa ukusetshenziselwa i-sinter powder ceramic, i-ceramic ferrule namanye ama-zirconia ceramics.
2. Isithando somlilo singasetshenziselwa ukusika i-sinter diamond blade, izinduku ze-carbide, amathuluzi wokusika we-carbide njalonjalo.
3. Isithando somlilo singasetshenziswa njengokuphathwa kokushisa kwebhande lethusi nensimbi.
4. Isithando somlilo esingasetshenziselwa ukusetshenziselwa ukushisa noma ukushisa isifunda sefilimu esinyene, ama-resistors amafilimu aminyene nezinto ze-elekthronikhi zensimbi i-electrode, i-LTCC, i-heater yensimbi, amaphaneli elanga neminye imikhiqizo efanayo.
Ngamafuphi, isithando somlilo sisebenza kakhulu embonini yensimbi nensimbi, imboni yokusansimbi, imboni yezinto ezibonakalayo nokunye.
1.Izinto zokuzihlukanisa ngokushisa zinomzimba oyisilinda omile kanzima ngokusebenza okuhle kakhulu kokuhlukaniswa nokushisa, ingxenye enqamulelayo iyisakhiwo esinezingqimba eziningi zekhabhoni esizwakala siyinhlanganisela.
2. Ukulawulwa kwamazinga okushisa okuhlukaniswe ngamasentimitha amathathu kuklanywe ngokukhethekile usayizi wenduku nokusatshalaliswa okungajwayelekile kuqinisekisa ukufana kwamazinga okushisa.
3. Ibhokisi lokushisa elingaguquguquki eligcwele ibhokisi lokushisa / amayunithi wokushisa angeniswa evela eJapan, isakhiwo sinengqondo futhi siqinile, isici sokushisa sithuthukile ekwakhiweni, ukufakwa noma ukuhlukaniswa kulula futhi kulula.
4. Idizayini eyingqayizivele yohlelo lokususa imishini kanye nemishini ehambisanayo yesihlobo, iqinisekisa izinga lokuqoqwa kwe-wax ngaphezu kuka-97.5%.
5. I-molybdenum alloy tube evikelekile izithandani ezishisayo zingeniswa zisuka e-USA ezethula ubuchwepheshe obuphambili kakhulu
6. Idivayisi yokupholisa esheshayo yesilinda yomnyango ithuthukisa ukupholisa (amahora angu-4-5 ukunciphisa izinga lokushisa ukuqala), ithuthukise ukusebenza kahle kwesithando somlilo.
7. 15 "Uhlelo lokulawula i-Touch Screen + SIEMENS PLC lungaqinisekisa ukuphepha nokwethembeka kwesithando futhi irekhodi lemininingwane lingafinyelela eminyakeni eyi-1, ijika lomlando lingaqopha idatha engama-32, isikhombimsebenzisi sinembile.
8. Ifakwe uhlelo lokushintshanisa olubuyiselayo lwamanzi apholile angena nangaphandle, ngaphakathi kwamanzi asakazwa ngokujikeleza okuvaliwe kungangeza i-deoxidizing agent kanye ne-antirust ngokwendlela ye-THRONE yokwelula isikhathi sokuphila komzimba womlilo.
9. Umshini wepayipi usebenzisa insimbi engagqwali engu-304.
10. Uhlelo oluphuthumayo lokushintsha amanzi, uma kwenzeka uhlelo lokunqamuka kwamandla / lwamanzi luzishintshela kumthombo wamanzi wokusekelayo; Abasebenzisi bangagcwalisa ngeyunithi yokukhiqiza amandla amancane ukuqinisekisa ukunikezwa kwamanzi okusakaza.
11. Idizayini yesitimela esiqondisa ama-roller ngaphakathi kwesithando somlilo yenza ukushaja kwempahla kube lula, kuphephe futhi kusheshe.
12. I-alamu yomsindo nokukhanya uma phezu kwezinga lokushisa noma ingcindezi kuqinisekisa ukusetshenziswa okuphephile.
13. Lolu hlelo luzokwahlulela ngokuzenzakalela futhi luthande ukumisa lapho amandla eqhubeka ngemuva kokuphela kukagesi.
14. Ukumelana nokuqapha okuzenzakalelayo komhlaba ukuvimbela ukuvuza.
Langaphambilini Carbide Cutting Amathuluzi
Olandelayo: Amathiphu we-Carbide
Ngokwezifiso Imikhiqizo ye-Tungsten Carbide